နိုင်ငံတကာသတင်း Archives - Page2of4- Channel Lover
အာဏာရှင် ပူတင်၏လက်ကိုင်ဒုတ်များ ယူကရိန်းပြည်သူတို့၏ ပစ္စည်းများအား ခိုးယူ(ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ Kamenets-Podolsky မြို့မှာ အရပ်ဝတ်နဲ့ အရပ်ကား သုးံကာရုရှား စစ်သားအဖျက်သမားများကို ယူကရိန်းစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်…… ထို့ပြင် ရုရှားစစ်သားများသည် ယူကရိန်းပြည်သူတို့၏ ပစ္စည်းများကို ခိုးဆိုးလုယက် ယူဆောင်နေတာကိုလည်း ပြည်သူတစ်ဦးက ရိုက်ယူထားတာကို လည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်……. ရုရှား စစ်သားတစ်ချို့ ခန္ဓာကိုယ်ပိန်လှီနေပြီး အစာရေဆာ ပြည်ဝသည့်ပုံမပေါက်ပဲ အာဟာရချို့တဲ့သည့်အနေအထားကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်……. တိုက်ပွဲက နေရာအနှံ့လိုဖြစ်ပွားနေပြီး ယူကရိန်း သမ္မတ Zelensky ဦးဆောင်ပြီး စစ်ယူနီဖောင်းကို ၀တ်ဆင်ကာ ရုရှားကို သေသည်အထိ တိုက်ခိုက် ရန်အတွက် ရှေ့တန်းသို့ သေနတ်ယူဆောင်ကာ တိုက်ပွဲဝင်နေသည်ဟု သိရသည်……. 𝓣𝓱𝓮𝓽 𝓜𝓪𝓾𝓷𝓰 unicode အာဏာရှငျ ပူတငျ၏လကျကိုငျဒုတျမြား ယူကရိနျးပွညျသူတို့၏ ပစ်စညျးမြားအား ခိုးယူ(ရုပျသံ) … Read more
ယူကရိန်း သမ္မတ Volodymyr Zelensky ရဲ့ လေးစားစရာကောင်းတဲ့ သတ္တိနဲ့ စိတ်ဓာတ်
ယူကရိန်း သမ္မတ Volodymyr Zelensky ရဲ့ လေးစားစရာကောင်းတဲ့ သတ္တိနဲ့ စိတ်ဓာတ် ခေါင်းဆောင်ကောင်းက ခေါင်းမရှောင်ဘူး။ ပြည်သူနဲ့တသားတည်းပဲလေစားပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရက ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelensky ကို ရုရှားက ဖမ်းသွားမှာ/သတ်ပစ်လိုက်မှာစိုးလို့ ကယ်ထုတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပေမယ့် ယူကရိန်းသမ္မတကတော့ လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ်။ ယူကရိန်းသမ္မတရဲ့ သတ္တိနဲ့ ရဲရင့်မှုတို့ကိုလေးစားပါတယ်။ အမြန်ဆုံးအနိုင်ရပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ် မြန်မာပြည်ကြီးလဲ အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါစေ…။ ကမ္ဘာကြီးလဲ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ အားလုံး အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ…။ unicode ယူကရိနျး သမ်မတ Volodymyr Zelensky ရဲ့ လေးစားစရာကောငျးတဲ့ သတ်တိနဲ့ စိတျဓာတျ ခေါငျးဆောငျကောငျးက ခေါငျးမရှောငျဘူး။ ပွညျသူနဲ့တသားတညျးပဲလစေားပါတယျ။ အမရေိကနျအစိုးရက ယူကရိနျးသမ်မတ Volodymyr Zelensky ကို ရုရှားက ဖမျးသှားမှာ/သတျပဈလိုကျမှာစိုးလို့ ကယျထုတျဖို့ ပွငျဆငျနပေမေယျ့ ယူကရိနျးသမ်မတကတော့ … Read more
ယူကရိန်းပြည်သူတို့၏ ပစ္စည်းများခိုးယူနေသည့် ရုရှားစစ်သားများကို ယူကရိန်းစစ်တပ် ဖမ်းဆီး(ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ အာဏာရှင် ပူတင်၏လက်ကိုင်ဒုတ်များ ယူကရိန်းပြည်သူတို့၏ ပစ္စည်းများအား ခိုးယူ Kamenets-Podolsky မြို့မှာ အရပ်ဝတ်နဲ့ အရပ်ကား သုးံကာရုရှား စစ်သားအဖျက်သမားများကို ယူကရိန်းစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်…… ထို့ပြင် ရုရှားစစ်သားများသည် ယူကရိန်းပြည်သူတို့၏ ပစ္စည်းများကို ခိုးဆိုးလုယက် ယူဆောင်နေတာကိုလည်း ပြည်သူတစ်ဦးက ရိုက်ယူထားတာကို လည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်……. ရုရှား စစ်သားတစ်ချို့ ခန္ဓာကိုယ်ပိန်လှီနေပြီး အစာရေဆာ ပြည်ဝသည့်ပုံမပေါက်ပဲ အာဟာရချို့တဲ့သည့်အနေအထားကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်……. တိုက်ပွဲက နေရာအနှံ့လိုဖြစ်ပွားနေပြီး ယူကရိန်း သမ္မတ Zelensky ဦးဆောင်ပြီး စစ်ယူနီဖောင်းကို ၀တ်ဆင်ကာ ရုရှားကို သေသည်အထိ တိုက်ခိုက် ရန်အတွက် ရှေ့တန်းသို့ သေနတ်ယူဆောင်ကာ တိုက်ပွဲဝင်နေသည်ဟု သိရသည်……. 𝓣𝓱𝓮𝓽 𝓜𝓪𝓾𝓷𝓰 unicode … Read more
ယူကရိန်းလေဆိပ်အား ရုရှားတို့မှ ဒုံးကျည်နဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ (ရုပ်သံ)
February 25, 2022 by Channel Lover
ယူကရိန်းလေဆိပ်အား ရုရှားတို့မှ ဒုံးကျည်နဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ (ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ရုရှားသမ္မတပူတင်မှ ယူကရိန်းကို အလုံးစုံ ကျူးကျော်ဖို့ စတင်လိုက်ပြီးနောက် ရုရှား-ယူကရိန်း စစ်ပွဲ စတင်ချိန် တွင်…ယူကရိန်းမှ Dnieperမြစ်အနီးရှိ Dnipro ၏ ကောင်းကင်ယံတွင် လိမ္မော်ရောင် မီးခိုးလုံးကြီးများဖြင့် အပြည့်ဖြစ်နေပြီး… ယူကရိန်းလေဆိပ်အား ရုရှားတို့မှ ဒုံးကျည်နဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့် ကြောက်စရာတဲ့ ရုပ်သံမှတ်တမ်း #Video – Daily Mail #ThawZinAung unicode ယူကရိနျးလဆေိပျအား ရုရှားတို့မှ ဒုံးကညျြနဲ့ ပဈခတျတိုကျခိုကျသညျ့ ကွောကျစရာတဲ့ (ရုပျသံ) ရုပျသံကို အောကျဆုံးတှငျ ဖျောပွထားပါသညျ…။ ရုရှားသမ်မတပူတငျမှ ယူကရိနျးကို အလုံးစုံ ကြူးကြျောဖို့ စတငျလိုကျပွီးနောကျ ရုရှား-ယူကရိနျး စဈပှဲ စတငျခြိနျ တှငျ…ယူကရိနျးမှ … Read more
ယူကရိန်းမှ တင့်ကားများနှင့် လက်နက်ဂိုဒေါင် တိုက်ခိုက်ခံရသည့်မြင်ကွင်း(ရုပ်သံ)
ယူကရိန်းမှ တင့်ကားများနှင့် လက်နက်ဂိုဒေါင် တိုက်ခိုက်ခံရသည့်မြင်ကွင်း(ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ရုရှား၏ဒုးံကျည်ဆန်ကျရောက်မှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ (၈ )ဦးသေဆုံးပြီး (၉)ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ယူကရိန်းပြည်တွင်းရေးရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်…… ယူကရိန်း ရဲ့ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံ နှင့် လေဆိပ် များပျက်စီးတဲ့အပြင် လူနေ တိုက်ခန်းအနီးဒုးံကျည်များကျရောက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်…… ကြာသပတေးနေ့ အစောပိုင်းတွင် မြို့တော် ကိယက်ဗ် အပါအဝင် ယူကရိန်း ပြည်နယ် အများအပြားတွင် ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပြီး တင့်ကား အများအပြားသည် ဘီလာရုစ် နယ်စပ်မှ ယူကရိန်းသို့ ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်…….. ယူကရိန်းကရုရှား တိုက်လေယာဉ် ၅ စင်းနဲ့ ရဟတ်ယာဉ် ၁ စင်း ပစ်ချခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်….. ရုရှား ဘက်ကတော့ယူကရိန်း၏ … Read more
ရုရှားလေယာဉ်တွေ ပစ်ချခံရ၊ ရုရှားစစ်သားတွေ အဖမ်းခံရသည့် (ရုပ်သံ)
ရုရှားလေယာဉ်တွေ ပစ်ချခံရသည့် (ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ယူကရိန်းဘက်မှ ရုရှား၏ပစ်ခတ်မှု့ကြောင့် ယခုချိန်ထိ လူပေါင်း (၄၀)သေဆုးံပြီး ရုရှားလေယာဉ်တွေ ပစ်ချခံရ✈️ 𝓣𝓱𝓮𝓽 𝓜𝓪𝓾𝓷𝓰 ရုရှားလေယာဉ်တွေ ပစ်ချခံရသည့် (ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ယူကရိန်းဘက်မှ ရုရှား၏ပစ်ခတ်မှု့ကြောင့် ယခုချိန်ထိ လူပေါင်း (၄၀)သေဆုးံပြီး ရုရှားလေယာဉ်တွေ ပစ်ချခံရ✈️ 𝓣𝓱𝓮𝓽 𝓜𝓪𝓾𝓷𝓰 ရုရှားလေယာဉ်တွေ ပစ်ချခံရသည့် (ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ယူကရိန်းဘက်မှ ရုရှား၏ပစ်ခတ်မှု့ကြောင့် ယခုချိန်ထိ လူပေါင်း (၄၀)သေဆုးံပြီး ရုရှားလေယာဉ်တွေ ပစ်ချခံရ✈️ 𝓣𝓱𝓮𝓽 𝓜𝓪𝓾𝓷𝓰 unicode ရုရှားလယောဉျတှေ ပဈခခြံရသညျ့ (ရုပျသံ) ရုပျသံကို အောကျဆုံးတှငျ ဖျောပွထားပါသညျ…။ ယူကရိနျးဘကျမှ ရုရှား၏ပဈခတျမှု့ကွောငျ့ ယခုခြိနျထိ … Read more
ယူကရိန်းနိုင်ငံ Kharkov မြို့သို့ ရုရှားလေထီးတပ်သားများ ဆင်းသက်နေသည့်(ရုပ်သံ)
ယူကရိန်းနိုင်ငံ Kharkov မြို့သို့ ရုရှားလေထီးတပ်သားများ ဆင်းသက်နေသည့်(ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ယူကရိန်းနိုင်ငံ Kharkov မြို့သို့ ထောင်ချီရှိသည့် ရုရှားလေထီးတပ်သားများ ဆင်းသက်နေတာဖြစ်ပါတယ် ဒါ့အပြင် ယူကရိန်းလေတပ်စခန်းတွေ၊ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ ရုရှားက ပြောကြားလာတဲ့ သတင်းတွေလဲ တက်နေပါတယ် ယူကရိန်းနိုင်ငံ Kharkov မြို့သို့ ရုရှားလေထီးတပ်သားများ ဆင်းသက်နေသည့်(ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ယူကရိန်းနိုင်ငံ Kharkov မြို့သို့ ထောင်ချီရှိသည့် ရုရှားလေထီးတပ်သားများ ဆင်းသက်နေတာဖြစ်ပါတယ် ဒါ့အပြင် ယူကရိန်းလေတပ်စခန်းတွေ၊ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ ရုရှားက ပြောကြားလာတဲ့ သတင်းတွေလဲ တက်နေပါတယ် unicode ယူကရိနျးနိုငျငံ Kharkov မွို့သို့ ရုရှားလထေီးတပျသားမြား ဆငျးသကျနသေညျ့(ရုပျသံ) ရုပျသံကို အောကျဆုံးတှငျ ဖျောပွထားပါသညျ…။ ယူကရိနျးနိုငျငံ Kharkov … Read more
ရုရှား၏ လုပ်ရပ်ကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှသည် သမိုင်းတွင် မမြင်ဖူးသော အကျိုးဆက်များဆီသို့ ဦးတည်သွားမည်ဟု ပူတင် ခြိမ်းခြောက် ယူကရိန်းလေတပ်စခန်းများနှင့် အခြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ရုရှားစစ်တပ်က ပြောကြားသော်လည်း လူနေထူထပ်သည့်နေရာများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသေးဟု သိရသည်….. ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်က ယူကရိန်းမှာ စစ်ရေးအရ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခု ဆင်နွှဲနေတယ်လို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် ရုရှား၏ လုပ်ရပ်ကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှသည် သမိုင်းတွင် မမြင်ဖူးသော အကျိုးဆက်များဆီသို့ ဦးတည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပူတင်က အခြားနိုင်ငံများကို သတိပေးထားသည်…. အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်က ရုရှားကို ကမ္ဘာက “တာဝန်ယူမည်” ဟု ပြောကြားပြီး NATO ၏ အကြီးအကဲက ရုရှား၏ လုပ်ရပ်သည် နိုင်ငံတကာဥပဒေကို ချိုးဖောက်ကာ ဥရောပနှင့် ၎င်း၏ … Read more
ရုရှား တိုက်လေယာဉ်(၅)စင်း ရဟတ်ယာဉ် ၁ စင်းပစ်ချခံရ✈️🚁(ရုပ်သံဖိုင်) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ရုရှား၏ဒုးံကျည်ဆန်ကျရောက်မှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ (၈ )ဦးသေဆုံးပြီး (၉)ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ယူကရိန်းပြည်တွင်းရေးရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်…… ယူကရိန်း ရဲ့ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံ နှင့် လေဆိပ် များပျက်စီးတဲ့အပြင် လူနေ တိုက်ခန်းအနီးဒုးံကျည်များကျရောက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်…… ကြာသပတေးနေ့ အစောပိုင်းတွင် မြို့တော် ကိယက်ဗ် အပါအဝင် ယူကရိန်း ပြည်နယ် အများအပြားတွင် ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပြီး တင့်ကား အများအပြားသည် ဘီလာရုစ် နယ်စပ်မှ ယူကရိန်းသို့ ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်…….. ယူကရိန်းကရုရှား တိုက်လေယာဉ် ၅ စင်းနဲ့ ရဟတ်ယာဉ် ၁ စင်း ပစ်ချခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်….. ရုရှား … Read more
မနေ့က တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရုတ်တရက် တံတားကျိုးကျသည့် (ရုပ်သံ)
December 19, 2021 by Channel Lover
မနေ့က တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရုတ်တရက် တံတားကျိုးကျသည့် (ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ တရုတ်နိူင်ငံ Hebei ပြည်နယ်တွင် တံတားကျိုး ကျသောကြောင့် လူ(၄)ဦးသေဆုးံ ပြီး(၈)ဦး ဒဏ်ရာရရှိ ဒီဇင်ဘာ (၁၈)ရက်နေ့ တရုတ်နိူင်ငံ Hubeiြ ပည်နယ် Wuhuang အဝေးပြေး အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်၌ တံတားရုတ်တရက် ကျိုးကျပြီး တစ်ဖက်သို့တိမ်းစောင်းသွားပြီးနောက် အနည်းဆုံး လူ (၄ )ဦး သေဆုံးပြီး (၈ )ဦး ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်…….. 𝓣𝓱𝓮𝓽 𝓜𝓪𝓾𝓷𝓰 မနေ့က တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရုတ်တရက် တံတားကျိုးကျသည့် (ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ တရုတ်နိူင်ငံ Hebei ပြည်နယ်တွင် တံတားကျိုး ကျသောကြောင့် လူ(၄)ဦးသေဆုးံ ပြီး(၈)ဦး ဒဏ်ရာရရှိ … Read more